Global Voices teny Malagasy » Ao Amin’ny “Cafe de Monk” Ao Japana, Afaka Misotro Kafe, Mihinana Mofomamy Ary Misy Mihaino Ireo Niangana Tamin’ny Tsunami · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Novambra 2015 8:50 GMT 1	 · Mpanoratra PRI/PRX's The World Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Japana, Fivavahana, Mediam-bahoaka, Vaovao Tsara, Voina
Taio Kaneta miaraka amin'ny fiarany misy marika “Cafe de Monk” ampiasainy amin'ny tranony fisotroana kafe vonjimaika. Amin'ny maha-moanina Bodista azy, manolotra zavatra manokana ho an'ireo izay mbola voadona tamin'ny loza voajanahary telo: horohoron-tany, tsunami sy ny loza ara-nokleary i Kaneta. Sary: Tompon-tsary: Naomi Gingold. Nahazoan-dalana avy amin'ny PRI
Ity lahatsoratra sy tatitra amin'ny onjam-peo avy amin'i Naomi Gingold  ho an'ny The World  ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org  tamin'ny 23 Oktobra 2015, ary navoaka teto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Raha namely an'i Japana tamin'ny volana Martsa 2011 ny loza voajanahary telo ahitana tsunami, horohorontany sy loza ara-nokleary, nikorontana ny fiainan'ireo olona an-hetsiny.
Milaza amiko i Taio Kaneta fa tohina mihitsy izy ireo. “Very ny fahaizan'ny olona mahatsapa zavatra, nanjary tsy misy fihetseham-po izy ireo. Tahaka ny mamanala ny fon'izy ireo ka tsy afaka na dia mitomany aza.
Moanina Bodista i Kaneta, ary tamin'ity andro ity, handeha hankany amin'ny iray amin'ireo fametrahana fotodrafitrasa fampiantranoana vonjimaika taorian'ny loza izahay. Ao Japana, matetika ny moanina bodista mandevina ary mampahery ireo olona nidonam-pahoriana. Aorian'ny loza, sahirana tanteraka izy ireo sy ireo mpivavaka amin'ny finoana hafa – tsy noho ny isan'ny olona niharam-boina ihany fa noho ny fomba iatrehana ireo olona marobe very zavatra betsaka ihany koa.
Milaza i Kaneta fa nanomboka niasa an-tsitrapo izy, manome sakafo, saingy nieritreritra izy fa afaka manao izany ny olona rehetra, inona no azoko atao izay ataon'ny moanina bodista ka tsy vitan'olon-kafa?
Tsy tsotra ny vahaolana, na izany aza. Manamarika i Kaneta fa amin'ny endrika samihafa ny fijalian'ny olona tao anatin'ny faritra nitrangan'ny loza. Manana soatoavina sy fiaviana ara-pivavahana samy hafa izy ireo, ary laika ny ankamaroan'ny Japoney, somary miahiahy amin'izay zavatra mifandraika amin'ny fivavahana.
Ka nieritreritra izy: “Tsy maintsy mamorona zavatra tampoka ianao, toy ny amin'ny Jazz. Tsy miova ny fototry ny zavatra ataonay. Fa tsy maintsy mi-groove ao anatiny ianao. “
Nilaza i Kaneta, izay mpiangaly mozika ihany koa, fa te hamorona toerana ahafahana manala ny hamafin'ny fon'ny olona izy. Izany no nahatonga ity moanina manintona ity nivezivezy manodidina ny faritra, mametraka fisotroana kafe vonjimaika [toy ny mitety tsena] izay nomeny anarana hoe “Café de Monk.”
Natao hisy dikany telo ny anarana.
Voalohany, moanina izy. Saingy ny voambolana ‘monku’ amin'ny teny Japoney dia midika hoe mitaraina.
“Tahaka ny hoe avelao ho an'ny moanina izany. Hifampizara ny enta-mavesatrareo izahay, “hoy izy. Ary ny tena votoatiny, milalao ny Thelonius Monk izy.
Ao amin'ny Cafe de Monk, kafe, mofomamy, ary sofina mahay mihaino. Sary: Naomi Gingold. Nahazoan-dalana avy amin'ny PRI
Tamin'ity andro ity, nipoitra tao amin'ny toerana fampiantranoana vonjimaika tao Yokoyama ao amin'ny prefektioran'i Miyagi ny Café de Monk. Tanora moanina telo hafa no niditra tao; miditra ao ihany koa indraindray ireo mpivavaka avy amin'ny finoana hafa. Tsotsotra ny toerana, saingy misy fitsipika vitsivitsy.
Ho an'ny anankiray, tsy resaka fivavahana no andehanana ao. Nilaza i Kaneta fa tsy hitory teny no ankanesan'izy ireo ao.
“Mifanohitra amin'izany, mihaino ny asanay,” hoy izy. “Mamosaka ny fijaliana, alahelo, ary ny fifalian'izy ireo izahay. Tena mihaino. “
Izany karazana fihainoina sy fandraisana ny fihetseham-po sy ny tantaran'izy ireo izany no dingana voalohany ilain'izy ireo ahafahany mijoro tsara indray.
Mihinana mofomamy sy misotro kafe ireo mpitsidika ao amin'ny fisotroana kafe. Misy ny fanorana sy ny fitsaboana ara-kanto. Miravaka haingo-tanana izy ireo – haingo-tanana izay sapile (chapelet) Bodista ara-teknika, saingy tsy misy milaza izany na miraharaha.
Amin'ny fomba marobe, toa mahazatra loatra izany – miresadresaka, misotro kafe. Ary izany no tena izy. Tsy ampy teo amin'ny fiainan'izy ireo izany fahatsoran-javatra izany.
Avy ao Minami-Sanriku, tanàna ao amorontsiraka atsinanan'i Japana izay tena ravan'ny tsunami ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny tobin'i Yokoyama.
Mahafinaritra ny tendrombohitra manodidina eto, saingy tsy mora kosa ny fiainana ao amin'ireo trano fonenana vonjimaika ireo. Tsy natao ho trano fonenana maharitra izy ireo: Tsy mitàna hafanana na hatsiaka tsara ny efi-trano; saika henonao daholo aza ireo feo saika avy ao amin'ny manodidina; ary mbola miraviravy tanana mieritreritra ny fomba irosoana amin'ny fiainana ry zareo ao.
Mitsidika ny tranom-bahiny fisotroana kafe Eiko Oyama i Kaneta amin'ny hariva mba hiresaka sy hivavaka ao amin'ny toerana masina Bodista natsangana ho an'ny zafikeliny vavy 2 taona. Namoy ny ainy tamin'ny tazo tampoka io zafikeliny io raha tonga honina eto.
Nilaza i Oyama fa indraindray misy famorian'olona ao amin'ny efitranon'ny fikambanana, saingy hafa tanteraka ny Café de Monk.
“Rehefa manao Café de Monk izy ireo, marobe ny olona tonga. Ary tsy mifanafina am-po izahay. Ary tena mahay mihaino ny moanina. “
Nilaza i Levi McLaughlin, mpanampy mpampianatra ao amin'ny Oniversitem-panjakana ao North Carolina izay mianatra ny Bodisma ao Japana fa tsy manilikilika tahaka ny mety ataon'ny mpanampy mpitsabo na avy amin'ny fanjakana ny trano fisotroana kafe.
Na dia tsy hetsika ara-pivavahana aza izany, nilaza izy fa “mila ny fahaizana matihanin'ny [moanina] tahaka ny mpivavaka mikarakara ny maty sy manome fahatsiarovana ary manao zavatra hafa ny hotely fisotroana kafe … ary tsy vitan'ny mpitsabo izany. “
Na dia somary maneho ny ambangovangon'ny lohahevitra bodista aza izany, nilaza i McLaughlin fa miampitampita malalaka ny fetran'ny sekta sy ny fivavahana i Kaneta sy ny hafa mba hanao izay ilaina hanampiana ny olona.
Teny an-dalana hiverina any an-tempoliny rehefa tany Yokoyama, nanontany an'i Kaneta aho raha mba efa reraka izy. Mampiantrano ity fisotroana kafe ity eo amin'ny manodidina saika isan-kerinandro izy nandritra ny efa-taona.
Nihomehy izy, ary namaly hoe: “Mazava ho azy fa reraka aho. Saingy tsy misy zavatra azonao atao momba izany. “
Indraindray, hoy izy, tena valaka tanteraka ara-batana sy ara-pihetsehampo.
Teo ho eo amin'ny herintaona lasa izay, tsy dia natoky fa mbola afaka hanohy izy. Saingy nanomboka nilona ranomafana izy hialana sasatra, ary raha manam-potoana, dia mitendry ny gitarany manodidina ny tanàna – manao Jazz na mihira ny hiran'ny Beatles.
Nilaza tamiko izy fa manana rakipeo natao vao haingana, ary rehefa tafaverina ao amin'ny tempoly izahay, dia nanome kapila mangilatra iray ahy izy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2015/11/04/76159/